विशेष Archives - Page2of 40 - Medianp
काठमाडौं, २१ कात्तिक । वि.स.२०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई पहिलो दल बनेको थियो भने एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी(हाल माओवादी केन्द्र) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो
राप्रपाको गणतन्त्रमा राजतन्त्र अटाउने घोषणापत्र (पूर्णपाठ)
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक २१, २०७४१०:२०0
काठमाडौं, २१ कात्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधी सभा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरको छ । मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा गणतन्त्रमा सबैले स्विकार गर्ने राजसंस्था आवश्यक भएको उल्लेख छ । उसले ‘राजासहितको
काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल अकूत सम्पत्ति प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका छन् । अख्तियारले आइतबार अर्यालसँग बयान लिएको छ । अर्यालसँगको बयानपछि अहिले नेपाल प्रहरीमा हलचल सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीभित्र
भोजपुरमा उमेशजंग भर्सेस सुदन : आपराधिक घटनामा जोडिएका माओवादीका सुदनलाई एमालेको भर र डर दुवै
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १९, २०७४११:३७0
भोजपुर, १९ कात्तिक । एमालेको गढ तर माओवादीबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेकाले भोजपुर जिल्ला अहिले निकै चर्चामा छ । आगामी मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उमेशजंग रायमाझी र माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराँती उम्मेदवार बनेका छन्
काठमाडौं, १६ कात्तिक । वाम गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा नेपाली कांग्रेसलाई पुँजीपति वर्गको
काठमाडौं, १५ कात्तिक । ओखलढुंगाका उज्ज्वन श्रेष्ठ हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ परी कारागार चलान गरेपछि नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल अहिले चर्चामा छन् । आठ वर्षदेखि राज्यका आँखा अगाडि ‘फरार’ रहेका
घोषणापत्र लिक भएपछि कांग्रेसमा हलचल, डा.स्वर्णिम वाग्लेमाथि नेताहरूको आरोप
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक १४, २०७४१२:१६0
काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार (आज) १२ः३० बजे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । मंगलबार सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको केही घन्टामै कांग्रेस घोषणापत्र लिक भयो । पार्टी
कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र : वाम गठबन्धन सत्ता स्वार्थी, माओवादी केन्द्र अवसरवादी (पूर्ण पाठसहित)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १३, २०७४१७:४६0
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक घोषणा पत्रमा वाम गठबन्धनलाई सत्ता स्वार्थको संज्ञा दिएको छ । माओवादी केन्द्रलाई अस्थिर राजनीतिक लाभ
प्रचण्ड हारेको काठमाडौं १० मा रामबहादुर थापाको चर्चा, कस्तो होला भिडन्त ?
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १३, २०७४१३:०१0
काठमाडौं, १३ कात्तिक । एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले आज साँझसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी टुंगो लगाउने भएका छन् । वाम गठबन्धनले ४० जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ६०–४० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डामा टुंग्याइसकेका
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १२, २०७४०९:५३0
बिरामीको मृत्युपछि ‘अस्पताल र डाक्टरको लापरवाही’ भनेर हुने हुलदंगा र आफन्तले दिने उजुरीको विधिसम्मत सुनुवाइ नगरिंदा अस्पतालका अँध्यारा कोठामा लाशको मोलतोल गर्ने क्रम बढ्दैछ, कसरी ? भिषा काफ्ले/जनक तिमिल्सिना २ असोज २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा चिकित्सकको